Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Ethiopia oo tooshka lagu Ifinayo Baaq kasoo baxay Gudomiyaha The create Trust
Wadanka Ethiopia oo tooshka lagu Ifinayo Baaq kasoo baxay Gudomiyaha The create Trust
Posted by ONA Admin	/ June 1, 2012
Waxaa maalmahan soo baxaya Qoraalada ay Haayadaha Iyo uruada Xuquuql Insaanku ku dhaleecaynayaan Taliska Zenawi waxaana maanta soo baxay caddeymo iyo baadhitaano hor leh oo Haayada “The Create TRUST” oo ah haayad ka dhisan wadanka UK ay kaga faaloonayso Dhibaatada Dadka Ethiopia ay dowlada TPLF u geysato.
Waxaan horey warbixino hore idiinku soo gudbinay hayada Xuquuql Insaanka Human Rights Watch oo faalo dheer ka qortay tacadiyada Dhulka Ogadeniya ay ka geystaan Ciidamada gacan ku sameyska ah ee meleshiyaadka ah ee Zenawi maal galiyo si ay u gumaadkaan maatida una burburiyaan hantida Ogadeniya, Waxaa kale oo aan idiin soo gudbinay warbixintii ku aadaneyd Kaligi Taliye Zenawe sida uu u maamulo Ethiopia anaga oo idinla wadaagnay warbixintii Royal Afrikan Soceity iyo Shirkii OSLO Freedom Forum oo labadaasba lagu soo bandhigay Kaligii Taliye Zenawi iyo damaciisa foosha xun.
Qormadan waxaan kusoo qaadanayna Gudoomiyaha Haayada The Create Trust oo ka hadlay Dhibaatada Dowlada Ethiopia u geysato shacabka Ethiopia. Haayadan ayaa ah haayad samafal oo laga leeyahay wadanka UK lana aasaasay sanadkii 2005. Waxaa haayadan asaaskeedu yahay inay wax u qabato Haweenka iyo Caruurta tabaaleysan waxayna sidoo kale ka hadashaa Xuquuqda Shaqsi ee bani aadanimo shaqsiyaadka loo diido xuquuqdas asaasiga ah. Waxaa haayadan ay shaqadeedi ugu horeysay ka bilowday wadanka Ethiopia sanadkii 2006.
Gudomiyaha Ururkan the Create Trust ayaa soo saarey qoraal xog badan ku qoranyahay oo uu ugu magac daray Dhulka Ethiopia oo beec ah, Qormadan waxa uu Graham peebles kaga waramay cadaalad darada iyo tacadiga loo geystay shacabka Ethiopia, Tacadigaas iyo cadaalad daradaas oo ay geysanayaan Dowlada Ethiopia.
taliska Ethiopia waxa uu ka gaday dhulka ay shacabka ethiopia daganayeen shirkado lacag kaash ah heysta waxaana dhulkii laga bara kiciyay dadkii iska lahaa si dhulkooda looga gado shirkadahaas. Dadka dhulkay daganayeen kaliya lama siin shirkadaha ee waxaa kale oo laga gaday Wabiyadii iyaga oo leexsanaya wabiyada, waxaa ay qodanayaan ceelal waxayna dhisanayaan Damam midaas oo keenaysa in muwadiniinti dhulka u dhashay ay waayaan biyihii ay cabi lahayeen iyo dhulkii xoolaha loo daaqsiin geyn lahaa.
Arintan waxa uu si gaar ahaaneyd ugaga hadlay warbixino la xidhiidha dhulka Gambela, balse waxa aynu ognahay in Dhulka Ogadneiyana ay arrintan oo kale ay ka jirto iyada oo Gobola Shiniile iyo Gobolka Goday ay taliska Ethiopia ka gaday shirkado shisheeye. Waxaan ognahay dhulka Ogadneiya in dhul badan oo tuuloyin ahaa la gubay dadkii ree guuraaga ahaana lagu qasbayo in xoolaha laga laayo si ay dhulka uga qaxaan ama logu qasbo inay noqdaan dad dagaan ahaan meel loogu hagaago si loo soo dajiyo dhulkaas beeralay. Waxaana in kabadan 150,000 oo qoys oo xoolo dhaqate ahaa laga moora duugay xoolahoodi iyaga oo daabiyado sida xeryaha qaxootiga oo kale la dajiyay. Waxaan ogsoonahay in Dhulkaas Ogadeniya wabiyada mara laga dhisay biyo xidheeno oo xoola dhaqatadii heli jirtay biyaha laga xanibay. Wabiyada Ogadeniyana aysan hadda soo rogmanin oo biyihii meelaha fog ka iman jiray yaraadeen. Arintaasna ay saameysay nolosha dad badan oo Somalida Ogadeniya oo ku xidhnay wabiyadaas.
Waxaa hadaba dhibatadaas la qaba Ogadeniya Gobolka Gambella oo sida warbixinta ku qoran dadkii tuulooyinkoodii la gubay, lana bara kiciyay dhulkoodina laga gaday shirkado qodoto ah. Waxaa wabiyadii loo leexsaday dhul beereedka shirkadahan. Nolosha Gobolka Gambella ayaa aad looga deyriyay.
hadaba Waxaa Haayada The Create Trust gudeenkeedu uu sheegay in dhamaan arrimaha ay ku kacday Dowlada Ethiopia ay tahay mid kasoo horjeeda bani aadanimada. Waxay kasoo horjeeda Xeerarka caalamiga ah ee u yaala UN. oo ah mid waliba wadanka Ethiopia uu qeyb kayahay xeerkaas oo waa ay saxeexeen xeerkan sanadkii 2007 oo dhigaalkiisu yahay (Article 26/1)
qodobka xeerkan ayaa dhigaya in muwadiniinta dhulka dagaan ahaan iska lehi inay xaq u leeyihiin lahaanshaha dhulka ay dagaan ahaan daganyihiin, waxaa kale oo ay lahaansho u leeyihiin dhamaanba dhulkaas waxsoo saarkiisa iyo waxa ahaaday ee ay dhaqan ahaan dhaxaltooyo ulahaayeen ama ay daganayeen ama ay isticmaalkiisa lahaayeen. qodobkiisa labaad xeerkan ayaa isna cadeynaya. In muwaadiniinta Dhulka Degaan ahaan iska lehi ay xaq u leeyihiin lahaanshaha dhulka, isticmaalkiisa, waxsoosaarkiisa iyo horumarintiisa iyo maamulidiisa intaba. iyo dhamaanba waxii ay sababtaas ay ku heleen.
Ethiopia oo xeerarka noocan ah saxeexday balana qaaday inay hirgalinayso qodobadan iyo kuwakaleba ayaa ku xad gudubtay, waxayna iyada oo dadka dhulka iska leh ee daganaa aan kala tashan ay shirkado ka gaday taas oo sababteeda lagu barakiciyay qowmiyado dhan oo muwadiniin ah oo dhulkaas dhaqan ahaan iyo deegaan ahaanba xaq u lahaa lahaanshihiisa. Wadanka Ethiopia ayaa sharcigoda sheegaya dhulka in Dowladu iska leedahay dadkuna ay dagaan ahaan u joogaan kaliya.
Qowmiyadahan dhulka laga qaatay ayaa waxaa dhulkan ay daganayeen boqolaal sanno iyo kabadan. waana damaca Gumeysiga Zenawi uu ku rabo dhulka Ogadeniya innuu kulawareego.
Hadaba Gudomiyaha ururka The Create Trust ayaa baaq u diray dowladaha Caalamka ugana digay damaca Zenawi oo sheegay in dhulkaas uu ka qaadi doono qowmiyadaha isla leh isaga oo wax xeerin ah aan sameyn doonin, taas waxay noqonaysa dadkii dhulka boqolaalka sanno soo dagana ee dhaxalka u lahaa inlaga moora duugo. xoolahooda dhulkii ay daaqi lahaayeen iyo dhulki waraabka ahaa ee biyaha ay ka cabi lahaayen intaba in uu ka gadi doono shirkado.
Waxaa hadda Ethiopia kumanaan kun ay ka xoogtay dhulkoodi, dadkaas oo hadda aad u tabaaleysan kaalmona heysan walibana gaajo ba’ani heyso.
baaqan ayaa kusoo aaday waqti goobo badan looga hadlay kaligii taliye Zenawi iyada oo la filayo inay soo baxaan bishan gudaheeda dhawaaqyo kale oo aad u xoog badan,
waxii dhowaaqan lagu baadi goobayo sidii Ethiopia wax looga qaban lahaa aad kala socotaan Wararka ONA